Gogoldhiga Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Tottenham v Chelsea - jornalizem
Gogoldhiga Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Tottenham v Chelsea
Tababare Andre Villas-Boas ayaa ka horimaan doona maanta duhurtii kooxdii ceyrisay sannadkan ee Chelsea, ma ka aarsan doonaa Blues, mise xaalada ayay ku sii murjin doonaan?
Kulanka: Tottenham v Chelsea
Waqtiga: 2:45pm xilliga Soomaaliya
Spurs ayaa waxaa ka maqnaan doona Scott Parker, kaasoo garoomada ka maqnaanaya ilaa dhamaadka bisha December. Daafacyada Benoit Assou-Ekotto iyo Younes Kaboul ayaa iyagana weli maqan, laakiin Jake Livermore iyo Kyle Naughton ayaa ku soo laabtay tababarka ka dib dhaawacyo ay qabeen.
Chelsea ayaa waxaa ka maqnaan doona kabtankooda John terry kaasoo ay u bilaabatay ganaax afar kulan ah. Frank Lampard iyo Ryan Bertrand ayaa dib iyagana ugu soo biiray tababarka Blues ka dib markii ay seegeen labadii kulan ee England. Ma jiraan dhibaatooyin kale oo ay qabaan kooxda haatan hogaanka u heysa Premier League.
Tottenham ayaa haatan laga badinin sagaal kulan, mana aysan dhadhamin guuldarro tan iyo kulankii furitaanka oo ay marti u ahaayeen Newcastle.
Spurs ayaa badisay afartii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka.
Inay 7da kulan ee ugu horeysa ka helaan 14 dhibcood, waxa ay heerkaas gaareen kaliya xilli ciyaareedkii 2009-10, markaasoo 15 dhibcood ay ka helaan tiro la mid ah kulamada ay ciyaareen haatan.
White Hart Lane ayaa haatan noqonaya garoon ay adag tahay in Spurs looga badiyo, iyagoo ku badiyay 15 kulan oo ka mid ah 21dii kulan ee u danbeysay ee ay ku ciyaareen garoonkooda, waxaana looga badiyay labo jeer mudadaas.
Andre Villas-Boas ayaa guulo gaaray kala bar 40kii kulan ee uu Chelsea tababare u ahaa.
Chelsea ayaan ku badinin White Hart Lane lixdii kulan ee ugu danbeysay ee ay booqdeen.
Ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, Chelsea gool lagama dhalin qeybta labaad ee ciyaar, waa kooxda kaliya ee sidaas sameysay.
Blues ayaa xilli ciyaareedkan shabaqa ilaashatay afar kulan, halka xilli ciyaareedkii hore oo dhan ay shabaqa ilaashadeen 10 kulan.